Fandraharahana : mbola betsaka ny mampiverin-dalana | NewsMada
Fandraharahana : mbola betsaka ny mampiverin-dalana
Betsaka ny tombontsoa mety ho hitan’ny vahiny mpampiasa vola eto Madagasikara. Maro toy izany koa izy ireo maniry hiditra eto, saingy eo ihany ireo sakana isan-karazany efa hatramin’ny ela. Raha ny hita, mety miverin-dalana na ny avy eto an-toerana aza.
Azo lazaina ho manapotika ny toekarena ny krizy politika miverimberina eto amin’ny tany sy ny fanjakana. Taorian’ny 2002 fotsiny, ohatra, tsy latsaky ny 600 tapitrisa dolara ny fatiantoka nahazo ny toekarena malagasy. Mbola tsy tafarina akory ny toekarem-pirenena, niverina indray ny krizy ny taona 2009, 1,7 miliara dolara ny fatiantoka hita. Mibaribary izany tamin’ny fikatonan’ny orinasa maro, fitomboan’ny tsy anasa sy ny very asa, tapaka ny fifandraisana ara-toekarena tany ivelany. Mibaribary ny fitomboan’ny fahantran’ny vahoaka malagasy.
Maro ny tombontsoa hita …
Mahita anefa ireo mpampiasa vola fa betsaka ny azo hampivoarana ny toekarena malagasy. Harena voalohany misongadina amin’izany ny fahatanoran’ny mponina, mora mahafehy asa, ahitana manampahaizana, ary anisan’ny mamparisika ireo mpandraharaha ireo ny karama azo lazaina fa mora, mora loatra aza ka misy endrika fanararaotana indray.
Tombontsoan’ny mpampiasa vola ny maha Nosy an’i Madagasikara, malalaka, ohatra, raha ho an’ny sehatry ny jono, misokatra amin’ny fitaterana an-dranomasina. Ny toetr’andro sy ny zavaboahary, mety tsara ho an’ny fizahantany sy ny fambolena. Singa iray afaka manampy tsara ireo mpampiasa vola ireo noho i Madagasikara tafiditra amin’ny tsena eoropeanina, Comesa, COI, Agoa, ary amin’izao fotoana izao, betsaka ny tinady amin’ny vokatra isan-karazany any Azia.
Sehatra iray “saropady” ny tany
Eo anefa ireo tambana isan-karazany, karazana sakana mihitsy mampiverin-dalana ny fandraharahana amin’ny endriny maro samihafa. Sakana iray lehibe indrindra ny fananan-tany. Raha ny lalàna, tsy azo omena ny vahiny ny tany. Ao anatin’ny kolontsaina malagasy mihitsy izay hasin’ny tany izay amin’ny maha tanindrazana azy. Mampikatso ny asa fampandrosoana amin’ny lafiny maro io fananan-tany io eto Madagasikara. Sehatra iray “saropady” ny tany.
Sakana iray lehibe hafa ny mahasarotra ny fanaovan-draharaha any amin’ny fanjakana. Maharitra ela loatra ary izay ihany koa ny anisan’ny mampahazo vahana ny kolikoly any amina sampandraharaha maro. Voakiana matetika ny ao amin’ny fadintseranana sy momba ny hetra. Ary olana goavana mbola tsy voavaha hatramin’izao ny tsy fahampian’ny angovo sy ny faharatsian’ny lalana. Mbola miampy ny tsy fandriampahalemana ireo. Na misy ezaka sy tetikasa maro aza amin’ireo voalaza fa sakana ireo, ny krizy politika no tena atahorana.